WAR DEG DEG AH: Caawa Taleefankaaga Iska Fogee+ Si aad U badbaado.! | Afrikada
WAR DEG DEG AH: Caawa Taleefankaaga Iska Fogee+ Si aad U badbaado.!
Afrikada,Mareykanka: Dadka jooga Mareykanka ayaa loo jeediyay digniin. Sidoo kale kama marna dadka jooga qeybaha kale ee caalamka, waxaa cirbixiyeenka iyo duuliyeyaasha hawada sare ay sheegayaan in caawa fiidkii ilaa saq dhexe 12-ka saac iyo barka si aad u soo dhowaan doono xidigga ‘Mars’ loo yaqaan. Waxa khubaradu sheegayaan in uu wato ‘radiation’ khatar ku ah aadmiga.
Xiddigtan soo dhowaanshaheeda waxaa laga dareemayaa meelo kala gedidan gaar ahaan Mareykanka oo qof waliba taleefankiisa uu iska fogeeyay si uusan radiationkani u qarxinin taleefanka.
Hadaba dadweynaha waa in ay taxadaraan oo ay taleefannada iska fogeeyaan, sida adigoo madaxaaga iyo jirkaaga ka durkinaya ilaa masaafo 1 ilaa 2 mitir ah.
Wakaaladda Mareykanka u qaabilsan hawada ee NASA ayaa sheegtay in tamarta uu bixiyo xiddigga Mars ay Ku jirto “Radiation” halis Ku ah baniaadamka.
Sida aynu ognahay Qorraxda ayaa radiation keedu ina soo gaaraa waana aynu ku caafimaadnaa oo Alle mudaawaad ayuu inooga dhigay. Balse falaaraha uu bixiyo xiddigga MARS waa kuwo u shaqeeya sidii korontada oo kale ‘electromagnetic’ oo kale taasi oo habeenkii uu soo gudbiyo balse waxaa detect gareyn kara aaladaha hawada la shaqeeya ee iyaguna radioactive-ka ah sida waayerrada taleefannada ama anteenooyinka isgaarsiinta telefishinnada ama raadiyeyaasha.
Akhristow waxaa jira fiilooyin ili ma aragtay ah kuwaasi oo ah kanaallo balaayiin ah oo horteenna iyo gadaasheenba mara. Aadmigu awood looma siinn inuu arko, waxaana ay soo gudbyaan iskuna xiraan aaladaha aynu isticmaalno maalin kasta.
Isla dariiqyadaasi ayaa waxaa kuu soo mari karta khataro badan oo ka tan badan xadigii awoodeed ee aad hore u isticmaaleysay.
Si kastaba ha ahaatee, Mars ayaa ah xiddiga keliya ee Galbeedka iyo Waqooyiga caalamka u soo baxa sidii Dayaxii oo kale. Waxaa uu mar iska dhigaa Buluug, mar Dhiig Guduudan marna waa dayax caadi ah oo iftiima, markii ugu dambeysayna waxa uu maalin cad isku aadiyey qorraxda taasi qaaradda Mareykanka ka dhigtay gudcur habeen ah.